Amanqaku kaGeorge Corugedo Martech Zone |
Amanqaku ngu UGeorge Corugedo
Isazi sezibalo kunye nesigqeba sobuchwephesha esinamava, uGeorge Corugedo uneminyaka engaphezu kwama-20 eshishina kunye nobuchwephesha bobuchwephesha. Njenge-Co-founder kunye ne-CTO ye I-RedPoint yeHlabathi, UGeorge unoxanduva lokukhokelela kuphuhliso lolawulo lwedatha yeRedPoint kunye nezisombululo zokubandakanya abathengi. Uphethe i-BS kunye ne-BA kwiGeology neMathematics, ngokwahlukeneyo, kwiDyunivesithi yaseMiami, nakwi-MS kwi-Applied Mathematics kwiDyunivesithi yaseArizona.
NgoMvulo, Julayi 11, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 UGeorge Corugedo
Amaqonga oLawulo lweDatha (DMPs) eza kwindawo yeminyaka embalwa edlulileyo kwaye abonwa ngabaninzi njengomsindisi wentengiso. Apha, bathi, sinokuba "nerekhodi yegolide" kubathengi bethu. Kwi-DMP, abathengisi bathembisa ukuba unokuqokelela lonke ulwazi oludingayo lokujonga i-360-degree yomthengi. Ingxaki kuphela-ayisiyonyani nje. UGartner uchaza i-DMP njengeSoftware efaka idatha kwimithombo emininzi